Ikamelo elilodwa - I-Airbnb
Jurunas, Pará, i-Brazil
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Neide
Sawubona isivakashi esingathanda ukuvakashela i-Belém do Pará futhi esidinga indawo yokuhlala eyamukelayo njengomama noma ugogo wakhe. Ngakho uma yilokho okufunayo, bhukha ikamelo ekhaya lami. Kodwa okokuqala, sicela ufunde ngokucophelela lokho okunikezwa ukubungaza kwami ngaphansi kokuthi “ Funda kabanzi ngale ndawo.”
Ungathanda ukuhlala endaweni ephephile futhi enobungane? Ngakho bhukha leli kamelo. Indlu yami ilula kodwa ilungele ukuhlala kwakho. Inefeni ne-Air-conditioning, ikhishi lethu linakho konke ukulungiselela ukudla kwakho uma uthanda noma ucela ukudla okwenziwe yimi. Indlu yami iseduze nesikhungo sezomlando nezokuvakasha sase-Belém do Pará, ngaphezu kokuba seduze ne-FUPA (Federal University of Pará). Uzokwamukelwa kakhulu endlini yami.
Indawo eyakhelene ne-Jurunas okwamanje ingenye yezindawo ezizungeze amadolobha amakhulu kunazo zonke e-Paraense: iningi lezitaladi zayo liqanjwe ngegama lezizwe zomdabu, njenge- Tupinambás, i-Tamoios, i-Mundurucus, kanye negama lomakhelwane elihlonipha isizwe somdabu. Indawo eyakhelene yahlalwa ukwakhiwa kwe-St. José Kaen ukuhlalisa umyalelo wenkolo we-Our Lady of Piedade ngo-1749. I-convent endala namuhla ingenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu zase-Belém. I-Jurunas iyikhaya lezikole eziningana zendabuko ze-samba e-Belém, njenge: Jurunense Samba Gym, i- 'Rancho I' Angikwazi Ukuyithanda kanye ne-Jurunense Heart.
Ngihlale ngikulungele ukusiza izivakashi zami nganoma iyiphi indlela engenzeka ngayo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Jurunas namaphethelo